भर्खरै सिन्धुपाल्चोकबाट आयो निक्कै दु'खद् खबर ! काठमाडौं आउँदै गरेको बस दु'र्घ'टनाग्र'स्त, ३५ जना घाईते -
Home News भर्खरै सिन्धुपाल्चोकबाट आयो निक्कै दु’खद् खबर ! काठमाडौं आउँदै गरेको बस दु’र्घ’टनाग्र’स्त,...
भर्खरै सिन्धुपाल्चोकबाट आयो निक्कै दु’खद् खबर ! काठमाडौं आउँदै गरेको बस दु’र्घ’टनाग्र’स्त, ३५ जना घाईते
दसैंको टिका नभएपछि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा पुगेका थिए । उनले आफन्तहरुसंग भेटघाट गरे । पारिवारिक सदस्य गुमाएका कारण ओलीले यो पटक दसैंको टिका लगाएनन् । तर झापावाट फर्केर शनिवार एकाएक काभ्रेको कुशादेवी पुगेका छन् । कुशादेवी जाने उनको कुनै औपचारीक कार्यक्रम थिएन ।
कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि उनले एमालेको स्थानीय पार्टी कार्यालय अघिल्तिर केही बेर भुलेका थिए । त्यसबखत केही कार्यकर्ताले उनीसँग फोटो खिचाएका थिए । ओलीले त्यहाँ कुनै राजनीतिक भाषण गरेनन् । कार्यकर्तासंग केही कुरा गरेको खुलेको छैन । कार्यकर्ताहरुले उनीसंग खिचाएका तस्बिरहरु मात्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
Previous articleखसी का टे जस्तो मान्छेलाई का टेर मासु थुपारेपछी गाउँलेहरु आफू पनि मा रिने ड रले थ र्कमान छन् (भिडियो हेर्नुस्)
Next articleहे भगवान् ! हातखुट्टा यस्तो भएको बच्चा जन्मियो ,रुवाबासि कठै (हेर्नुस् भिडियो )